Flim2MM: Into the Woods (2014)
ဝေါ့ဒစ်စနေက ထုတ်လုပ် ထားတဲ့ စိတ်ကူးယဉ် ဟာသဒရာမာ ဇာတ်ကားလေးအကြောင်း ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ကာတွန်းဇာတ်လမ်းလေးကို အခြေခံပြီး ရိုက်ကူးထားတဲ့ Musical ဇာတ်လမ်းလြေ ဖစ်လို့ ပုံပြင်လေး အသက်ဝင်လာသလို ခံစားရမှာပါ။
မုန့်ဖုတ်သမား ဇနီးမောင်နှံဟာ ရင်သွေးလိုချင်ကြပေမယ့် မုန့်ဖုတ်သမား မိသားစုကို စုန်းမ ကြီးက ကျိန်စာတိုက်ထားတာကြောင့် ကလေးမရကြပါဘူး။ မုန့်ဖုတ်သမားကို ကိုယ်ဝန်ဆောင် ထားချိန်တုန်းက သူ့ရဲ့အဖေဟာ စုန်းမကြီးရဲ့ ဥယျာဉ်ကို လုယူတယ်ဆိုပြီး အငြိုးထားကာ ကျိန်စာတိုက်ထားခဲ့တာဖြစ်ပြီး အကယ်၍ ကလေးလိုချင်တယ်ဆိုရင် နွားနို့လို ဖြူဆွတ်နေတဲ့နွား၊ သွေးရောင်လို နီရဲနေတဲ့ အပေါ် ၀တ်ရုံရှည်၊ ပြောင်းဖူးလိုဝါနေတဲ့ ဆံပင်နဲ့ ရွှေသားစစ်စစ်နဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ဖိနပ်တို့ ပေးရမယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။
ဒီဇာတ်လမ်းထဲမှာ ဂျက်နဲ့ ပဲပင်ဇာတ်လမ်းထဲက ဂျက်ရယ်၊ ၀တ်ရုံနီ နတ်သမီးလေးရယ်၊ ရွှေရောင်ဆံပင်တွေပိုင်တဲ့ ရီပွန်ဇယ်ရယ်၊ ရွှေဖိနပ်ကလေးကို ပိုင်တဲ့ စင်ဒရဲလားတို့လည်း ပါဝင်ပါသေးတယ်။ ဂျက်ဆီကနေ အဖြူရောင်နွား၊ ၀တ်ရုံနီနတ်သမီးလေးရဲ့ ပတ္တမြားရောင် တောက်နေတဲ့ ၀တ်ရုံရှည်၊ ရီပွန်ဇယ်ဆီက ရွှေ ဆံပင်နဲ့ စင်ဒရဲလားဆီက ရွှေဖိ နပ်ယူဖို့အတွက် စုန်းမ ကြီးက မုန့်ဖုတ်သမား ဇနီးမောင်နှံကို သူတို့တွေနဲ့ ဆက်သွယ်စေပါတယ်။
နောက်ဆုံးမှာတော့ စုန်းမ ကြီးလိုချင်တဲ့ အရာတွေအားလုံး ကို ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် မုန့်ဖုတ် သမား ဇနီးမောင်နှံဟာ သားလေး တစ်ဦး ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ပုံမှန်ဆိုရင် ဂျက်တို့၊ စင်ဒရဲလားတို့ပါတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးတွေက ပျော်ရွှင် စရာတွေနဲ့ အဆုံးသတ်ကြပေမယ့် ဒီဇာတ်ကားမှာတော့ ပြောင်းပြန် အနေအထားနဲ့ တွေ့ရမှာပါ။
ပျော်စရာတွေက ဘယ်လို အဆုံးသတ်တွေ ပြောင်းသွားမှာလဲ။ စုန်းမကြီးကကော ဘယ်လိုတွေ ကျိန်စာတိုက်ပြီး ဒုက္ခပေး သလဲဆိုတာတော့ ကိုယ်တိုင်ခံစား ကြည့်လိုက်ပါဦး။
ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ နာမည် ကျော် သရုပ်ဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ မယ်ရယ်စထရိ၊ အမ်မလီဘလန့်၊ ဂျိမ်းစ်ကော်ဒန်၊ ဂျော်နီဒပ်၊ အန် နာကန်ဒရစ်တို့ ပါဝင်ထားတာမို့ ပရိသတ်တွေ အကြိုက်တွေ့ကြ ဦးမှာပါ။
ရုပ်ရှင်အညွှန်း - Phoe Thigyar (http://www.inspire.com.mm)
[GENRE]:……………………….… .:) Adventure, Comedy, Drama
[FILE SIZE]:…………………….….:) 894 MB
[RELEASE RUNTIME]:………….:) 2h 05 mins
Posted by Y Junction at 10:13:00 AM
Labels: Adventure, Comedy, Drama, Hollywood
Top Yahu January 27, 2018 at 12:36 AM
Error တွေတက်နေတယ် ဒေါင်းလို့မရဘူး ဗျာ